Dowlada Mareykanka oo la soconeysa Dhaq dhaqaaqa Soomaalida kunool Gudaha Dalkaasi (Waa Maxay Sababta) - jornalizem
Dowlada Mareykanka oo la soconeysa Dhaq dhaqaaqa Soomaalida kunool Gudaha Dalkaasi (Waa Maxay Sababta)
Dowlada Mareykanka ayaa qorsheeneysa in lala socdo dhaq dhaqaaqa Soomaalida kunool gudaha Dalkaasi kadib markii ay kordheen dhalinyarada Soomaali Mareykanka ee weerarada argagaxiso ka fuliya meelo ka baxsan dalkaasi.
Beter king oo ah madaxa gudiga sirdoonka ee golaha sanadka Maraykanka ayaa u sheegay FBI-da wadankasi maraykanka in ay kor kala socdaan jaaliyada Soomaalida ee ku sugan wadanka maraykanka kadib weerarkii lagu qaaday xarun ganacsi oo ku taala wadanka kenya.
Beter king waxa uu sheegay in dablayda hubaysan ee ku sugan gudaha dhismaha westgate ay badankooda taba baro xoog leh soo qaaten ayna ka yimaadeen Dalka Mareykanka .
Waxana uu ka warbixiyay Sababaha keenay in warkasi xiligaan uu ka dhawaajiyo,,waxa uu masuulkasi sheegay in maraykanka ka baqdin qabo weeraro ay Sooomaalida ku sugan wadankasi ay ka fuliyaan gudaha dalkooda
Beter king waxa uu intaa ku daray in inta u dhaxeysa 40 ilaa 50-qof oo wata jinsiyada Maraykanka oo Somalia ah ay ka baxeen maraykanka si ay taba baro ugu qaatan gudaha wadanka Somalia waxana masuulka uu tilmaamay qaar kamid ah dadkasi in la dilay halka kuwa kalana ay nool yihiin.
Hadalka kasoo yeeray madaxa gudiga sirdoonka ee golaha sanadka Maraykanka ayaa imaanaya xili ay soo baxeen Warar Sheegaya in Dhalinyrada gudaha ugu jira Xarunta Westgate Mall ay u badan yihiin kuwa ka yimid gudaha Mareykanak kana tirsan Al-Shabaab.